Unyango lwe-Oxygen Hyperbaric - I-HBOT Therapy - Unyango lwe-Hyperbaric
Ulwaphulo lwe-Oxygen Hyperbaric - I-HBOT Therapy- I-Hyperbaric Therapy
ikhaya/Ulwaphulo lwe-Oxygen Hyperbaric - I-HBOT Therapy- I-Hyperbaric Therapy
Ulwaphulo lwe-Oxygen Hyperbaric - I-HBOT Therapy- I-Hyperbaric Therapyteknamfg2018-01-21T06:10:26+00:00
I-Hyperbaric Treatment Oxygen (HBOT)
Inzululwazi Yenza I-Hyperbaric Medicine
Unyango lwe-Oxygen Hyperbaric, kwaziwa njenge HBOT, unyango lwezokwelapha olunikelayo 100% oksijini kwinkqubo yesigulane yesigulane ngelixa besesigxininini. Isigulane siphefumula i-oksijeni kumanqanaba amakhulu kunokuba i-21% efunyenwe kwinqanaba elwandle eliqhelekileyo.
I-Hyperbaric Therapy isekelwe kwimithetho emibini engundoqo ye-physics.
"UMthetho kaHenry"Ichaza ukuba inani legesi echithwe kumanzi lilingana noxinzelelo lwegesi ngaphaya komlambo, ngaphandle kokuba akukho nzekayo eyenziwa ngamakhemikhali.
"UMthetho kaBoyle"Ithi ukufudumala rhoqo, umthamo kunye noxinzelelo lwegesi ayinani.
Oku kuthetha ukuba i-gas iya kugxininisa ngokulinganayo nomlinganiselo woxinzelelo osebenza kuyo. Ukusebenzisa le mithetho I-Oxygen Treatment ivumela i-oxygen engaphezulu ukuba ihanjiswe kwiisculi kunye namalungu.
Imiphumo emibi ayifanele kwaye ayidluli ixesha elide. I-Hyperbaric Medicine ayilona unyango lwezibonakaliso ezininzi kodwa ibonakalise ukwandisa amandla omzimba, ukunceda izigulane ezineengxaki ezivela kwiilonda ezingapheliyo ukuya kwiimeko ezikhubazekayo kunye nokukhubazeka kwegazi.
Imbali ye-Oxygen yonyango
Olu unyango lwezokwelapha oluya kulandelwa kwi-1600.
Kwi-1662, yokuqala Chamber of Hyperbaric lakhiwa kwaye yaqhutywa ngumfundisi waseBrithani ogama linguHenshaw. Wakha isakhiwo esibizwa ngokuba yi-Domicilium, esasetyenziselwa ukunyanga kwiimeko ezahlukeneyo.
Ku-1878, uPaul Bert, umfuyo wezilwanyana waseFransi, wafumanisa ukudibanisa phakathi kokugula okuxinzelelekileyo kunye ne-nitrogen bubbles emzimbeni. Emva koko uBert wafumanisa ukuba intlungu leyo ingayilungiswa ngokuphindaphinda.
Iingcamango zokuphatha izigulane phantsi kweemeko ezixinzelelekileyo zaqhutyelwa nguvulindlela waseFransi u-Fontaine, owathi kamva wakha igumbi lokusebenzela elincinci kwi-1879. I-Fontaine yabona ukuba inhaled oxide ene-nitrous yayinamandla amakhulu phantsi koxinzelelo, ngaphezu kwezigulane zakhe eziphuculweyo zomoya.
Ekuqaleni kwe-1900 uDkt. Orville Cunningham, uprofesa we-anesthesia, waqaphela ukuba abantu abanezifo zentliziyo baphucule bhetele xa behlala eduze kwinqanaba elwandle kunabo bahlala kwiindawo eziphakamileyo.
Wayephatha umlingane owayenomkhuhlane kwaye wayekufutshane nokufa ngenxa yokunciphisa imiphunga. Ukuphumelela kwakhe kwenyusa ukuba ahlakulele into eyayibizwa ngokuba yi "Hospital Ball Hospital" esekelwe elunxwemeni lweLake Erie. Isakhiwo sesithandathu sebali sasakhiwe kwi-1928 kwaye sasingu-64 inyawo ububanzi. Isibhedlele sinokufikelela kwi-3 atmospheres ngokupheleleyo (44.1 PSI). Ngelishwa, ngenxa yoxinzelelo lwezezimali lwezoqoqosho, lwakhiwa ngokutsha ngexesha le-1942.
IiChambers ze-Hyperbaric zaqulunqwa kamva emkhosini kwi-1940 yokuphatha abantu abaninzi baselwandle abanokugula ngenxa yokugula.
Kwi-1950, oogqirha baqala ukusebenzisa iMicrosoft Hyperbaric ngexesha lokuhlinzwa kwentliziyo kunye nemiphunga, okwabangela ukuba kusetyenziswe ukutyhefuza kwe-carbon monoxide kwi-1960. Ukususela ngoko, ngaphezu kweemvavanyo zeclini ze-10,000 kunye nezifundo zecala ziye zagqitywa ngezinye izicelo ezininzi ezinxulumene nempilo kunye nesininzi seziphumo zokubika ingxelo ephumelelayo.
UHMS ichaza Unyango lwe-Oxygen Hyperbaric (HBOT) njengongenelelo apho umntu ephefumula kufuphi ne-100% oksijeni ngokukhawuleza ngelixa ngaphakathi kwinqanaba le-hyperbaric elinyanzeliswayo kunomlinganiselo wokuncincika kolwandle (i-1 emoyeni, okanye i-ATA).
Ngeenjongo zeklinikhi, uxinzelelo kufuneka lulingane okanye lugqithise i-1.4 ATA ngelixa iphefumula kufuphi ne-100% oksijini.
I-United States i-Pharmacopoeia (i-USP) kunye ne-Compressed Gas Association (CGA) iBakala A ichaza i-oxygen ibakala ye-oxygen ukuba ingabi ngaphantsi kwe-99.0% ngokuvakala, kwaye uMbutho weSizwe woKhusela uMlilo uchaza i-USP ibakala le-oxygen.
Kweemeko ezithile kubonisa indlela yokwenza unyango oluphambili ngelixa kwabanye kukho ukulungelelaniswa kokungenelela okanye ukunyanzeliswa kwe-pharmacologic.
Unyango lunokwenziwa kwi-Monoplace Hyperbaric Treatment Chamber okanye kwi-Multiplace Hyperbaric Oxygen Treatment Chamber.
I-Monoplace Hyperbaric I-Oxygen Treatment Chambers uhlala nesigulane esinye; lonke igumbi linyanzeliswe kunye ne-100% oksijeni, kwaye isigulane siphefumula i-oxygen chamber ngokukodwa ngqo.
I-Multiplace Hyperbaric I-Oxygen Treatment Chambers ubambe abantu ababini okanye ngaphezulu (izigulane, ababonisi, kunye / okanye abasebenzi abancedisayo).
I-Multiplace Chambers igxininiswe ngomoya oxinyiweyo ngelixa izigulana ziphefumula nge-100% oksijini ngeemaski, ii-head hood, okanye i-tubotracheal tubes.
Ngokutsho kwencazelo ye-UHMS kunye nokuzimisela kwamaziko e-Medicare kunye neeNkonzo zeMedicaid (CMS) kunye nabanye abathwali bezithathu, ukuphefumla ibanga le-100% oksijini kwi-1 emoyeni yoxinzelelo okanye ukuveza iinxalenye ezizimele zomzimba kwi-100% i-oxygen ayiyi Unyango lwe-oksijeni yonyango.
Isigulana se-Hyperbaric kufuneka sifumane i-oksijini ngokufuthwa ngaphakathi kwegumbi lokunyamezela. Ulwazi olukhoyo lubonisa ukuba ukunyanzeliswa kufuneka ku-1.4 ATA okanye ngaphezulu.
Kukho izikhokelo ezivunyiweyo ze-14 e-USA.
Ukugqithiswa komoya okanye iGesi
I-Clostridial Myositis kunye ne-Myonecrosis (i-Gas Gangrene)
Ukuchoboza ukulimala, i-Compartment Syndrome kunye nezinye ii-Ischemias ezibuhlungu
Izifo ezithintekayo zeNecrotizing Soft Tissue
Ukuxakeka kweMitha yokuLawulwa kweMitha (i-Soft Tissue kunye neBony Necrosis)
Iingxoxo zeComputer kunye neFlaps
Ukutshatyalaliswa kobuGwenxa obushushu
Idiopathic Ngokukhawuleza Ukuvalela Ukulahlekelwa
Yintoni engekho iChrobarbar Chamber?
I-oksijeni ye-topical, okanye i-Topox, ilawulwa ngeklasi elincinci elibekwe ngaphaya komgca kwaye lucindezelwe nge-oxygen. Isigulane asiphefumli i-oksijeni, kwaye akukho ntsalela yomzimba onxinzelelweyo. Ngenxa yoko, isiguli asinakuzuza kwiimpembelelo ezininzi ze-Hyperbaric Medicine, ezisekhompyutheni okanye ezenzeka kwinqanaba elincinci kune-oksijeni ye-oxygen engenako ukungena (jonga i-Hyperbaric Physics ne-Physiology kwicandelo elingezantsi). I-Topox isekelwe kwingcamango yokuba i-oksijeni iyahlukana ngama-tishu kwi-micron i-30-50.  Le ndlela ayiphathi i-DCS, i-gaster emboli (AGE), okanye i-carbon monoxide (CO) yetyhefu.
Nge-Topox idibanisa ukuhlukana koxinzelelo kufuneka kwenziwe phakathi komatshini kunye nomoya ovulekileyo ukunyanzelisa umatshini. Ukuze ugcine umgca ungagxothwa ngaphandle komshini ogxininisiweyo, ibhobho yebhokisi kufuneka ifanelane ngokugqithiseleyo ekupheleni komda, ngaloo ndlela idale i-tourniquet njengefuthe. I-Topox ayinakutyhulwa yinshuwalense, kwaye ayivunyelwe liphepha leNtsholongwane kaGawulayo ukuze unyango lwezilonda zesilonda.
Olunye uhlobo lwegumbi lugumbi oluphathekayo lwe-Hyperbaric Chamber. Ezi zixhobo ezithambileyo zinokunyanzeliswa kwi-1.2-1.5 atmospheres ngokupheleleyo (ATA). Zivunywa kuphela yi-FDA ukuze unyango lwezinga lokugula. Uninzi lwezi zikhwama eziphakamileyo ze-TB zidayiswa ngokungenakutyala njenge- "Cild Hyperbaric Chambers" zengcaciso ezingenakuvunyelwa.